अनमोल केसी « Janata Samachar
Tag: अनमोल केसी
हलमा ‘यात्रा’ र ‘ए मेरो हजुर ३’, कुन हेर्ने ?
सदाको शुक्रबार झैँ यो साता पनि दुई नयाँ चलचित्रहरु प्रदर्शन भएका छन् ।
‘एरेन्जरमा लुकेको गायकी ‘क्याप्टेन’मा झल्कियो’
जोसेफ शाहीकाठमाडौं । लामो कपाल, गहुँगोरो वर्ण, हेर्दै मिलनसार अपरिचित व्यक्तिसँग अनामनगरस्थित रेकर्डिङ स्टुडियोमा भेट भयो । ६–७ वर्षअघि जीवनकै पहिलो गीत रेकर्डिङक्रममा संयोगवश भेटिएका अपरिचित व्यक्तिको नाम सुमन केसी
‘ए मेरो हजुर ३’ का दमदार १२ ‘डाइलग’
काठमाडौं । यसअघि दुई वर्षमा एउटा सिनेमा ‘कृ’ गरेका अनमोल यो पटक भने धमाधम चलचित्रको प्रामोशनमा व्यस्त छन् । केहिसाताअघि मात्र अनमोलको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘क्याप्टेन’ प्रदर्शनमा आयो ।
अनमोललाई उछिन्दै प्रताप नम्बर १ ट्रेन्डिङमा
काठमाडौं । नेपाल आईडलबाट लाखौं दर्शकको माया बटुलेका गायक प्रताप दासको नयाँ गित ‘बस बस रे’ युट्युब ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । ४ दिन अघि सार्वजनिक अनमोल
‘क्याप्टेन’ हेरेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया, ‘म अनमोल केसी चिन्दिन’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली परिवारसहित कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरमा गएर नेपाली चलचित्र ‘क्याप्टेन’ हेर्नुभएको छ । फागु पूर्णिमाको सन्दर्भ पारेर आफ्ना पिता र पत्नीसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ उक्त चलचित्र
हलमा ‘क्याप्टेन’ र ‘द ब्रेकअप’, कुन हेर्ने ?
काठमाडाैं । शुक्रवारबाट दर्शक र सिंगो फिल्म क्षेत्रले नै ठूलो आशा गरेका दुई चलचित्र ‘क्याप्टेन’ र ‘द ब्रेकअप’ एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । दीवाकर भट्टराई निर्देशित चलचित्र ‘क्याप्टेन’ मा अभिनेता
‘क्याप्टेन’को ट्रेलर हेरेपछि प्रदीपको यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । नेपाली सिनेजगतमा युवास्टारद्वय प्रदिप खड्का र अनमोल केसीलाई प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेरिन्छ । दुवै युवास्टारको फ्यान फलोइङ र पारिश्रमिक पनि एकदमै शानदार छ । मिडियामा प्रायजसो उनीहरुको प्रतिस्पर्धा र
फागुनमा अनमोलको ‘क्याप्टेन’, अहिले ट्रेलर हेर्नुहोस्
काठमाडौं । नायक अनमोल केसीको मूख्य भुमिका रहेको चलचित्र ‘क्याप्टेन’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा एउटा सामान्य युवक राष्ट्रिय टीमको कप्तान बन्नको लागि गर्नुपरेको कथालाई समेटिएको निर्माण टीमले जानकारी
‘क्याप्टेन’को ट्रेलर शुक्रबार
काठमाडौं । अनमोल केसी अभिनित चलचित्र ‘क्याप्टेन’को ट्रेलर आगामी शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको छ । चलचित्र निर्माण टीमले सोमबार एक पोस्टर सार्वजनि गर्दै चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक हुने जानकारी गराएको हो
काठमाडौं । युवास्टार अनमोल केसीको मुख्य अभिनय रहेको चलचित्र ‘क्याप्टेन’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्रको ‘रहर छ सँगै’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक : चार दल
बिरामी भर्ना नलिने अस्पतालकाे भनाइप्रति प्रशासनको ध्यानाकर्षण